मिति ः २०७३ फागुन २६ गते
आज भारतीय सीमा सुरक्षावल (एसएसबी) द्वारा कंचनपुर जिल्ला पुनर्वास नगरपालिका वार्ड नं. ८ जनकवस्ती ‘घ’ गाउ“ कार्गिल डा“डा, आनन्द बजार (दशगजादेखि २५० मिटर नेपाली भूमि) मा गोली प्रहार गरी स्थानीय गोविन्द गौतमको हत्या र नेपाल प्रहरीका सईलाई घाइते बनाएको घटनाप्रति हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । भारतीय सीमा सुरक्षावलद्वारा गरिएको यस जघन्य हत्याको हाम्रो पार्टीले निन्दा एवं भत्र्सना गर्दछ ।
पुनर्वास नगरपालिकाद्वारा विनियोजन भएको रु. ५ लाखमा नेपाली भूमिमा कलभर्ट निर्माण भएको थियो । उक्त कलभर्टलाई भारतीय सीमा सुरक्षा बलले हिजो राती आएर भत्काउने कार्य गरेको थियो । एसएसबीको उक्त कार्यको दृष्य कैद गर्न खोज्दा प्रगतिशील पत्रकार संघका नारायण न्यौपानेको क्यामेरा जफत गर्ने काम समेत गरेको थियो । एसएसबीले भत्काएको कलभर्ट हेर्नका लागि आज जम्मा भएका स्थानीय जनतामाथि भारतीय सीमाबाट अन्धाधुन्दा गोली प्रहार गरेको थियो ।
हाम्रो पार्टी तत्काल नेपाल सरकारस“ग मृतकको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र घाइतेको सम्पूर्ण उपचारको व्यवस्था गर्न माग गर्दछ । साथै भारतीय विस्तारवादलाई नेपाली सीमामा आपराधिक कार्य, सीमा अतिक्रमण, हस्तक्षेप र ज्यादति तुरुन्त बन्द गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं ।
भारतीय विस्तारवादको उक्त ज्यादतिको विरोधमा हाम्रो पार्टीले कंचनपुर सहित देशका विभिन्न जिल्लाहरुमा विरोध कार्यक्रम गर्ने ठेगान गरेको छ । कार्यक्रमलाई सफल पार्न र भारतीय विस्तारवादको भण्डाफोर गर्नको निम्ति हामी सम्पूर्ण जनतास“ग अपील गर्दछौं ।